Kidnapping : Administratera sivily iray karohina -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping : Administratera sivily iray karohina
Mahatondra Faneva. Izy ilay administratera sivily karohin’ny polisy ao amin’ny sampana misahana ny heloka be vava hatramin’izao. Tsy vitan’ny hoe voarohirohy amina afera maloto fa tena isan’ireo jiolahy raindahiny mihitsy.
“ Dimy farafahakeliny ny raharaha “kidnapping” nahavoarohirohy azy. Any amin’ny toeran’ny mpanome vaovao sy mpanao fanelanelanana no tena kapoakany. Na izany aza, dia mandray anjara mivantana ihany koa izy rehefa amin’ny raharaha goavana tahaka ny fakana an-keriny karana avotry ny polisy teny Alasora iny. Efa nifandray tendro tamin’ny ekipan’i Fredo ( jiolahy mpanao “kidnapping” efa matin’ny polisy ) ihany koa ny tenany”, raha ny fanazavana.
Efa voarohirohy tamina raharaha hafa koa izy. “ Ankoatra ny “kidnapping”, dia nahatrarana azy koa ny fanaovana taratasy hosoka hisolokiana olona. Efa manana tambazotra amin’ny resaka fisolokiana avo lenta mihitsy izy”, raha ny fanazavana hatrany.
Ny mahagaga ny rehetra, dia lehilahy manam-pahaizana ity Mahatondra Faneva ity saingy noho ny vitan-dratsy efa ananany dia izao lasa jiolahy rain-dahiny izao. Mahay mikirakira fitaovam-piadiana mahery vaika izy. Basy P.A. iray no any aminy. “ Efa zandary mantsy izy io taloha. Tena mahay mikirakira fitaovam-piadiana tokoa. Amin’ny maha zandary azy taloha izay dia tena manana hakingana be amin’ny fampiasana fitaovam-piadiana. Chef de bande no niantsoana azy tao anatin’ny tarika mpanao kidnapping nisy azy”, raha ny fanazavana hatrany.
Tsy ny olon-drehetra no tonga amin’izany toeran’ny “Administratera sivily” izany fa izay afaka amin’ny fifaninanana ihany. Andanian’ny fanjakana volabe mandritry ny fiofanana hataony, ka volavolaina ho tonga mpitarika eny anivon’ny fitantanan-draharaham-panjakana samihafa. Ity tranga mahakasika an’i Mahatondra Faneva ity anefa dia tena fanalam-baraka ny “Corps”-n’ny “Administratera Sivily” mihitsy satria dia nivaona amin’ny tsy izy mihitsy ny niafaran’ilay olona nandanian’ny fanjakana volabe. Olom-panjakana ambony tokony ho “modely” indray ve no nanjary lasa jiolahy raindahiny ifampitadiavana ankehitriny ? Sazy henjana no miandry ny olona mahay lalàna mamoa-doza tahaka azy.